Peeji kọntaktị na nkọwa maka arịrịọ ndị ahịa
Peeji a na-akpọtụrụ bụ maka mgbe ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọrụ anyị, nkwado, ngwaahịa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ biko zitere gị ozi n'ụdị ntanetị. Anyị na-arụ ọrụ ụbọchị ọ bụla (Mọnde ruo Fraịdee) site na 9 am ruo 6 pm, n’oge ngwụsị izu enwere onweghi ndi oru Oru ndi ahia. Enwere ike ịnweta anyị site na nkata ndụ, ozi email, ekwentị ma ọ bụ mpempe kọntaktị a. Anyị na-agbali ime ngwa ngwa ngwa ngwa o kwere mee.
Mkparịta ụka ndị ahịa
NDỌ AKA NA !! y-butyrolactone (GBL) bụ mgbe Mepụtara ma ọ bụ resị ya maka ahụ mmadụ. Mgbe ejiri ya, GBL kpatara mmebi ahụike na ma ọ bụ ọnwụ! Ọ bụrụ na enyo gị enyo n'iji kemịkal eji nke a, biko kpọọ ndị ọchịchị obodo ozugbo!
Anyị ọcha y-butyrolactone (GBL) bụ naanị rere ya ndị ahịa azụmaahịa.